Ukwakhiwa kwempahla - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Izakhiwo ze-Logistics zibhekisa ezakhiweni ezikhethekile zokugcina impahla nokuhamba. I-Logistics park ibhekisa endaweni lapho izinsiza ezahlukahlukene zokuhanjiswa kwempahla nezinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi okuphathwa kwezimpahla zisatshalaliswa maphakathi esikhaleni ezindaweni lapho imisebenzi yezimpahla igxiliwe nalapho kuxhumene khona izindlela zokuhamba eziningana. Futhi kuyindawo yokuhlangana yamabhizinisi we-logistics anesilinganiso esithile nemisebenzi ehlukahlukene yesevisi.
Ukuze unciphise isiminyaminya sasemadolobheni, unciphise ingcindezi yemboni kwezemvelo, ugcine ubumbano lwezimboni, uhambisane nenkambiso yentuthuko yezimboni, ubone ukuhamba kahle kwezimpahla, emadolobheni noma emaphethelweni asemadolobheni nasemaphandleni eduze nendawo enkulu imithambo yegazi, amaqembu amaningi okuphathwa kwezinto ezinamandla ezokuthutha, isitoreji, emakethe, imininingwane futhi ukuphathwa imisebenzi iyanqunywa. Ngokuthuthuka kancane kancane kwengqalasizinda ehlukahlukene kanye nezinsiza zezinsizakalo, ukuhlinzeka ngezinqubomgomo ezahlukahlukene zokukhetha ukuheha izikhungo ezinkulu zokuhambisa (ukusabalalisa) ukuhlangana lapha nokuzenza zithole izinzuzo zesikali kudlale indima ebalulekile ekuhlanganiseni imakethe nasekuqapheleni ukwehliswa kwezindleko zokungena ukuphathwa. Ngasikhathi sinye, yehlise imiphumela emibi eyahlukahlukene elethwe ukusatshalaliswa kwezikhungo ezinkulu zokusabalalisa enkabeni yedolobha futhi yaba imboni eyisisekelo esekela umnotho wanamuhla.
Esifundeni esithile, yonke imisebenzi ephathelene nempahla ezokuthutha, ukuphathwa kwezinto futhi ukusatshalaliswa, kufaka phakathi ezokuhamba zomhlaba wonke nezasekhaya, kutholakala ngo-opharetha abahlukahlukene (OPERATOR). Laba opharetha bangaba ngabanikazi noma abaqashi bezakhiwo nezinsizakusebenza (izindawo zokugcina izimpahla, izindawo zokudiliza, izindawo zokugcina impahla, indawo yamahhovisi, izindawo zokupaka, njll.) Ezakhiwe lapho. Ngasikhathi sinye, ukuze kulandelwe imithetho yokuncintisana kwamahhala, idolobhana lezimpahla kufanele livumele wonke amabhizinisi ahlobene eduze nalezi zinto zebhizinisi ezingenhla ukuthi zingene. Idolobhana lezimpahla kumele futhi libe nazo zonke izindawo zomphakathi ukufeza yonke imisebenzi eshiwo ngenhla. Uma kungenzeka, kufanele futhi ifake nezinsizakalo zomphakathi zabasebenzi kanye nemishini yabasebenzisi. Ukuze ukhuthaze ukuthuthwa kwempahla yezinhlobo eziningi, kuyadingeka ukuthi kusetshenziselwe indawo yezimpahla ngezindlela ezahlukahlukene ezifanelekile (umhlaba, ujantshi, itheku lolwandle olujulile / itheku lamanzi ajulile, umfula ngaphakathi nomoya). Okokugcina, kuyadingeka ukuthi idolobhana lezimpahla kumele liqhutshwe ngumgwamanda owodwa (RUN), kungaba owomphakathi noma wangasese.
Izakhiwo ze-Logistics zingezakhiwo zomphakathi. Ngokuthuthuka okusheshayo kwezikhathi, izakhiwo ze-logistics zethulwa ngendlela yayo eyingqayizivele. Amapaki wezimpahla akhethekile aya ngqo emachwebeni noma ezikhumulweni zezindiza, futhi izikhungo zokusabalalisa ezikhethekile ziya ngqo ezindaweni ezahlukahlukene zokusabalalisa, zakha uchungechunge lwezinto ezihlanganisiwe.
I-Logistics Park Warehouse
Logistics Distribution Isikhungo